စက်မှုအထည်အလိပ်ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှု Rolling Shutter တံခါး Repair China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:Rolling Shutter တံခါး,စက်မှုအထည်အလိပ် Rolling Shutter တံခါး,ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ခြင်း Rolling Shutter တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းတံခါး > self-Recovery ကို Rapid တံခါး > စက်မှုအထည်အလိပ်ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှု Rolling Shutter တံခါး Repair
စက်မှုအထည်အလိပ်ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှု Rolling Shutter တံခါး Repair
ဘရိတ်မော်တာသို့မဟုတ် SERVO မော်တာ။ ပါဝါအရင်းအမြစ် 220V / 50Hz သို့မဟုတ် 380V / 50Hz အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ပါဝါ 0.55-1.5KW; F ကို: IP55 ။ operating အပူချိန်: -30-60 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်။
2. ထိန်းချုပ်ရေး panel က
အီတလီနိုင်ငံအမှတ်တံဆိပ် SERVO control panel ထဲက။ ရိုးရာအန်ကုဒ်ထိန်းချုပ်မှုထက်မော်တာပြေးပိုမိုတိကျမှန်ကန်ထိန်းချုပ်အတူ။ နှင့်လူ့-စက် Interface ကို display ကိုနေ့စဉ်လည်ပတ်စေရန်, တပ်ဆင်ထားတာပိုမိုလွယ်ကူ setting ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာပြတ်ရွေ့ကိုယ်ပိုင်စစ်ဆေးခြင်းကိုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အမှားလည်းမရှိသည့်အခါအမှား codes တွေကိုပြသထားတယ်။
3. Air ကို-တင်းကျပ်စွာဒီဇိုင်း
အထူးဇစ်ပုံစံဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ပုံ, သူတို့ကိုအကြားကွာဟချက်ကိုဖျက်သိမ်းရေး, တစ်တကိုယ်လုံးအဖြစ်ထည်များနှင့်လမ်းပြသံလမ်းဆက်သွယ်။ ဒါဟာသိသာတဲ့ခြုံငုံတံဆိပျကိုစွမ်းဆောင်မှုနှင့်လေထုတင်းကျပ်စွာပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။
တစ်ဦးကပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် torsion နွေဦးမယ့်အစားကိုပုံမှန်လျင်မြန်စွာတံခါးခဲယဉ်းလူမီနီယံအလွိုင်းပရိုဖိုင်း၏, အောက်ခြေချိန်ခွင်လျှာအလေးချိန်အဖြစ်မွေးစားထားသည်။ forklift သို့မဟုတ်အခြားအရာဝတ္ထုအားဖြင့်တစ်ဦးတိုက်မှုမတော်တဆမှုလည်းမရှိတဲ့အခါ, တံခါးကိုပျက်စီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ထိုသို့လက်အကူအညီများအောက်မှာအလိုအလြောကျသို့မဟုတ် Semi-အလိုအလျှောက်ပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကဒီဇိုင်းကိုထိရောက်စွာတိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားသည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်လျော့နည်းစေသည်။
စံပစ္စည်း: သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ, မျက်နှာပြင်ခြယ်သလျက်ရှိ၏ optional ပစ္စည်း: 304 သံမဏိ
အထူ: လမ်းညွှန်သံလမ်းများအတွက် 2.0mm ထိပ်တန်းအဖုံးများနှင့်မော်တာအဖုံးများအတွက် 1.5mm ။
6. PVC အထည်အလိပ်:
ပစ္စည်း: PVC အထည်အလိပ်, ရရှိနိုင်ပါအထူ: 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm နှင့် 1.5mm; ရရှိနိုင်ပါအရောင်များ: အပြာရောင် / အဝါရောင် / နီ / မီးခိုးရောင် / အဖြူ / အပြည့်အဝရှင်းလင်းမည်။ အပြည့်အဝရှင်းလင်းပြတ်သား၏စျေးနှုန်း 5% အားဖြင့်အခြားသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ရှိသမျှသည်အခြားသောအရောင်များကိုတူညီတဲ့စျေးနှုန်းနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
အောက်ခြေမှာခ Proximity Sensor ကို။
သတိထားဘို့ C. နှိုးစက်အလင်း။
8. နျ Standard စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်း
one-ခြမ်းရေဒါ / အဝေးမှထိန်းချုပ် (2 ထိန်းချုပ်မှုပြား) / one-ခြမ်းမော်တော်ယာဉ် detector / one-ဘက်ဆွဲ switch ကို /; Interlocking
ဒါဟာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချိန်ပျော့အောက်ခြေအစွန်းနှင့်အတူ, အားဖြည့် PVC ထားခြင်းဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသွပ်ရည်စိမ်ဘက်ဘောင်မှပူးတွဲ polyethylene လမ်းကြောင်း။
အလိုအလျောက်အစာရှောင်လမ်းကြောင်းတံခါးကို reset အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PVC ကုလားကာမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Rolling တံခါးပြုပြင်ကိုယ်ပိုင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဇစ်ဒီဇိုင်းကိုယ်ပိုင်ကုသမှုမြန် Roll Up ကိုတံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Rolling Shutter တံခါး စက်မှုအထည်အလိပ် Rolling Shutter တံခါး ကိုယ်ပိုင်ပြုပြင်ခြင်း Rolling Shutter တံခါး quick Rolling Shutter တံခါး crystal Rolling Shutter တံခါး Rapid Shutter တံခါး roller Shutter stack တံခါး PVC Rolling တံခါး